Jenaraal Xuud ” Qof Walba Xaniinyahiisa Ayuu Fuulaya, Wax Waan waan Dambe Magaleyno” – Great Banaadir
Jenaraal Xuud ” Qof Walba Xaniinyahiisa Ayuu Fuulaya, Wax Waan waan Dambe Magaleyno”
BELEDWEYNE – Hoggaamiyaha Golaha Kacdoonka Hiiraan Jenaraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud ayaa Faah-faahin ka bixiyay Sababta ka dambeysa Dagaal ka dhacay Magaalada Baledweyne iyo waxyaabaha keenay.
Jenaraal Xuud ayaa sheegay in Dagaalka uu yimid kadib markii looga baxay Balan lala galay oo ahaa inaan Baledweyne lagu qaban karin Shirar iyo Kulamo la xariira Maamulka Hir-Shabeelle waa sida uu hadalka u dhigaye.
“Dagaalka waxaa keenay Hir-Shabeelle oo dhowr iyo toban Wasiir geysay Magaalada si ay Shir ugu qabsadaan, waxayna ka baxeen Heshiis ay nala galeen oo ahaa inaan Kulan ama Masuuliyiin kale imaan karin Baledweyne,” ayuu yiri Jenaraal Xuud.
Janeraalka ayaa sheegay in Qasaaraha dhankooda kasoo gaaray Dagaalkii Xalay uu yahay dhaawaca Laba Askari, isagoona sheegay dhanka kale inuu ka arkay Dhaawaca Afar Askari.
Jenaraal Xuud ayaa sidoo kale ugu hanjabay Ciidamada AMISOM oo Gacanta ku haya Garoonka Diyaaradaha Baledweyne iney qarxin doonaan Diyaarad dambe oo sida madax katirsan Hir-Shabeelle hadii ay kasoo degto Garoonka Baledweyne.
“Diyaaradahii Baledweyne waxay noqdeen kuwa Hir-Shabeelle u shaqeeya hadii Diyaarad dambe soo degto waan qarxin doona, wax Waan Waan ah oo aan geli doonana majiran Nin walba Xaniinyahiisa ayuu fuulaya,” ayuu yiri Jenaraal Xuud.
Majirto wali wax War ah oo kasoo baxay Dhanka Maamul Goboleedka Hir-Shabeelle oo ku aadan Dagaaladii Xalay Baledweyne ku dhexmaray iyaga iyo Ciidamada Kacdoonka Hiiraan.